Umgomo wobumfihlo - HGH Phuket
INGXENYE 1 - SENZANI NGOKWENZWA KWAKHO?
Uma uthenga okuthile kusuka esitolo sethu, njengengxenye yenqubo yokuthenga nokuthengisa, siqoqa ulwazi lomuntu siqu osinike lona njengegama lakho, ikheli nekheli le-imeyili.
Uma upheqa isitolo sethu, sithola futhi ngokuzenzakalelayo ikheli le-intanethi ye-intanethi ye-intanethi (IP) ukuze usinike ulwazi olusisiza ukuba sifunde ngesiphequluli sakho nesistimu yokusebenza.
Ukuthengwa kwe-imeyili (uma kusebenza): Ngemvume yakho, singathumela ama-imeyili mayelana nesitolo sethu, imikhiqizo emisha nezinye izibuyekezo.
ISIQEPHU 2 - ISITHOMBE
Uthola kanjani imvume yami?
Uma usinikeza ngolwazi lomuntu siqu ukuqedela ukuthengiselana, qinisekisa ikhadi lakho lesikweletu, ubeke umyalelo, uhlele ukulethwa noma ubuye ukuthenga, sisho ukuthi uyavuma ukuqoqa kwethu futhi siyisebenzise ngesizathu esithile kuphela.
Uma sicela imininingwane yakho ngesizathu sesibili, njengokuthengisa, sizokubuza ngokuqondile imvume yakho evezwe, noma sikunike ithuba lokuthi cha.
Ngisusa kanjani imvume yami?
Uma ngemuva kokungena ngemvume, uguqula ingqondo yakho, ungahoxisa imvume yakho yokuxhumana nawe, ukuthola iqoqo eliqhubekayo, ukusetshenziswa noma ukudalulwa kwemininingwane yakho, nganoma yisiphi isikhathi, Xhumana nathi
ISIGABA 3 - UKUQALA
Singakwazi ukudalula ulwazi lwakho lomuntu siqu uma sidinga umthetho ukwenza kanjalo noma uma uphula imigomo yethu yesevisi.
ISIGABA 4 - SHOPIFY
Idatha yakho igcinwa kwisitoreji sedatha ye-Shopify, yolwazi kanye nohlelo lokusebenza jikelele lwe-Shopify. Bagcina idatha yakho kuseva ephephile ngemuva kwe-firewall.
Uma ukhetha isango lokukhokha ngokuqondile ukuze uqedele ukuthenga kwakho, bese u-Shopify agcina idatha yakho yekhadi lesikweletu. I-encrypted nge-Standard Payment Industry Data Standard Standard (PCI-DSS). Idatha yakho yokuthengwa kokuthengwa igcinwa kuphela uma kudingekile ukuqedela ukuthenga kwakho. Emva kwalokho kuqedile, ulwazi lwakho lokuthengiselana lokuthengwa lususiwe.
Zonke izindlela zokukhokha eziqondile zihambisana nezindinganiso ezibekwa yi-PCI-DSS njengoba zilawulwa yi-PCI Security Standards Council, okuwumzamo ohlanganyelwe wezimpawu ezifana ne-Visa, MasterCard, i-American Express ne-Discover.
Izidingo ze-PCI-DSS zisiza ukuqinisekisa ukuphathwa okuphephile kolwazi lwekhadi lesikweletu ngesitolo sethu nabanikezeli bezinsizakalo.
Ukuthola eminye imininingwane, ungahle ufune ukufunda imigomo yesevisi yakwaShopify lapha noma isitatimende sobumfihlo lapha.
ISIGABA 5 - IZINKONZO ZESITHATHU
Ngokuvamile, abahlinzeki bezinkampani zangasese abasetshenziselwa ukuqoqa, basebenzise futhi badalule ulwazi lwakho ngendlela edingekayo ukuze bavumele ukwenza izinsizakalo abasinikeza zona.
Kodwa-ke, abanye abahlinzeki bezinsizakalo zenkampani yangaphandle, njengendlela yokukhokha kanye nezinye izinqubo zokukhokha zokukhokha, banezinqubomgomo zabo zobumfihlo mayelana nolwazi esiyadingeka ukuba sibanikeze ngokuthengiselana kwakho okuhlobene nokuthengwa.
Kulaba bahlinzeki, sincoma ukuthi ufunde izinqubomgomo zabo zobumfihlo ukuze ukwazi ukuqonda indlela ulwazi lwakho lomuntu siqu oluzophathwa ngayo nalaba banikezeli.
Ngokuyinhloko, khumbula ukuthi abahlinzeki abathile bangase babe khona noma babe nezindawo ezisezindaweni ezihlukile kunakho noma thina. Ngakho-ke uma ukhetha ukuqhubeka nokuthengiswa okubandakanya izinsizakalo zomhlinzeki wenkampani yangaphandle, imininingwane yakho ingase ibe ngaphansi kwemithetho yegunya (s) lapho umhlinzeki wesevisi noma izakhiwo zayo zitholakala khona.
Isibonelo, uma ukhona eCanada futhi ukuthengiselana kwakho kusetshenzwa ngesango lokukhokha elise-United States, khona-ke ulwazi lwakho lomuntu siqu olusetshenziselwa ukuqedela lo mkhiqizo lungaphansi kokudalulwa ngaphansi komthetho wase-United States, kuhlanganise noMthetho we-Patriot.
Uma ushiya iwebhusayithi yethu yesitolo noma uqondiswa kwiwebhusayithi yesithathu noma uhlelo lokusebenza, awusekho ngaphansi kwale Nqubomgomo Yobumfihlo noma Imigomo Yesevisi yethu yewebhu.
Uma uchofoza izixhumanisi esitolo sethu, zingakuqondisa kude nesayithi lethu. Asiwona obhekene nemikhuba yobumfihlo yamanye amasayithi futhi sikhuthaza ukuthi ufunde izitatimende zabo zobumfihlo.
ISIGABA 6 - UKUPHILA
Ukuze uvikele ulwazi lwakho lomuntu siqu, sithatha izinyathelo eziqaphayo futhi silandele imboni engcono kakhulu ukuze siqiniseke ukuthi ayilahlekile ngendlela efanele, isetshenziselwe kabi, ifinyelelwe, idalulwe, ishintshwe noma ibhujiswe.
Uma usinikeza imininingwane yekhadi lakho lesikweletu, imininingwane ibethelwa kusetshenziswa ubuchwepheshe bephepha lesendlalelo elivikelekile (I-SSL) futhi igcinwe nge-AES-256 encryption. Yize ingekho indlela yokudlulisa nge-Intanethi noma nge-elekthronikhi i-100% iphephile, silandela zonke izidingo ze-PCI-DSS futhi sisebenzise eminye imigomo eyengeziwe eyamukelwa embonini.
Nalu uhlu lwamakhukhi esiwasebenzisayo. Sibabhale lapha ukuze ukwazi ukukhetha uma ufuna ukuphuma kumakhukhi noma cha.
_session_id, ithokheni eliyingqayizivele, iseshini, Ivumela i-Shopify ukulondoloza ulwazi mayelana neseshini yakho (ibheke, ikhasi lokufika, njll).
_shopify_visit, akukho idatha egcinwe, Ukuphikelela emaminithini we-30 kusukela ekuhambeni kokugcina, Okusetshenziswa yizibalo zethu zangaphakathi zomhlinzeki wewebhu kuwebhusayithi ukurekhoda inani lokuvakashelwa
_shopify_uniq, akukho idatha egcinwe, iphelelwa phakathi kwamabili (ngokuhambelana nesithameli) ngosuku olulandelayo, Ibala inani lokuvakashelwa esitolo ngekhasimende elilodwa.
Inqola, uphawu oluyingqayizivele, oluqhubekayo kumaviki e-2, Ulwazi lokugcina mayelana nokuqukethwe kwenqola yakho.
_secure_session_id, ithokheni eliyingqayizivele, iseshini
Esitolo sangaphambili_digest, isibonakaliso esiyingqayizivele, esingapheli Uma isitolo sinesiphasiwedi, lokhu kusetshenziselwa ukucacisa ukuthi ngabe isivakashi samanje sinokufinyelela.
INGXENYE 7 - IMINYAKA YOKUGCINA
Ngokusebenzisa leli sayithi, ubonisa ukuthi okungenani uneminyaka yobudala emphakathini wakho noma esifundazweni sokuhlala, noma ukuthi uneminyaka yobudala besifundazwe noma isifundazwe sokuhlala futhi usinike imvume yakho ukuvumela noma yikuphi Abancinci bakho abancane ukusebenzisa leli sayithi.
ISIQEPHU 8 - IZINTSHINTSHO KOMTHETHO WOMTHETHO
Sigcina ilungelo lokuguqula le nqubomgomo yobumfihlo nganoma yisiphi isikhathi, ngakho sicela ubuyekeze kaningi. Izinguquko nokucaciswa kuzoqala ukusebenza ngokushesha lapho bethumela kwiwebhusayithi. Uma senza ushintsho lwezinto ezibonakalayo kule nqubomgomo, sizokwazisa lapha ukuthi ibuyekeziwe, ukuze uqaphele ukuthi yiluphi ulwazi esikuqoqayo, ukuthi silisebenzisa kanjani, futhi ngaphansi kweziphi izimo, uma kukhona, sisebenzisa futhi / noma sichaza It.
Uma isitolo sethu sitholakale noma sihlanganiswe nenye inkampani, ulwazi lwakho lungadluliselwa kubanikazi abasha ukuze siqhubeke nokuthengisa imikhiqizo kuwe.
IMIBUZO NOKWENZA ULWAZI
Uma ungathanda: ukufinyelela, ukulungisa, ukulungisa noma ukususa noma imiphi imininingwane yomuntu siqu esinayo ngawe, ukubhalisa isikhalazo, noma umane ufuna imininingwane engaphezulu Xhumana nathi